Jabuuti (magaalo) - Wikipedia
Caasimad in Gobolka Jabuuti, DjiboutiTemplate:SHORTDESC:Caasimad in Gobolka Jabuuti, Djibouti
Sawirro la isu keenay ee Jabuuti
Lua error in Module:Location_map at line 502: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Djibouti" does not exist.
Jabuuti (Af Faransiis : Djibouti; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa caasimada ugu weyn waana magaalada ugu weyn dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxay ku taalaa Gobolka Jabuuti dhinaca Gacanka Tadjoura.
Magaalada Jabuuti waxaa ku nool dad gaaraya ilaa 562,000, kuwaa oo tirinaya in kabadan 70% tirada guud ee dadka wadanka. Degitaanku waxaa aasaasay Faransiiska sanadkii 1888-kii, dhulkii laga kireystay xukunka Soomaalida iyo Afarta Suldaan. Intii lagu jiray muddadii ka dambaysay, waxay caasimad u ahayd Faransiis Somaliland iyo cidda ku xigta ee Saldhigga Faransiiska ee Afars iyo Issas.
2 Waddanmaha Degaaan Djibouti Mallgoka
3 Gobolka Jabuuti
6 Cimilada Jabuuti (Magaalo)
7 Magaalooyinka La mataanoobay
Waxaa jira cadaymo ku saabsan degitaanka aadanaha ee xeebta bari ee Jabuuti oo ku taariikhaysnayd xilligii naxaas ahaanta.
Laga soo bilaabo 1862 ilaa 1894, dhulka ilaa waqooyiga gacanka Tadjoura waxaa loo yiqiin Obock waxaana xukumayay Soomaalida iyo Afarta Suldaan, maamulada maxalliga ah oo ay Faransiisku kala saxiixdeen heshiisyo kala duwan intii u dhaxeysay 1883 iyo 1887 si marka hore ay gobolka lahaadaan. Isweydaarsiga qoraallada Faransiiska iyo Ingiriiska ee Febraayo 2 iyo 9, 1888 waxay hagaajineysaa xadka dhuleed ee u dhaxeysa gumeystihii labada dal. Waxay si cad uga baxaysaa xukunka Faransiiska xuduudaha koonfureed ee Gacanka Tadjoura, oo ay kujirto jasiirad ka kooban plateaux insubari karin, Ras Djiboutiil. Markaa markaa waa in qodobkaan loo adeegsado u bixitaanka safrayaasha xagga Harar.
Masjidka Al Sada sanadkii 1940.
Faransiiska ayaa markii dambe asaasay Magaalada Jabuuti sanadkii 1888-kii, oo ah xeeb aan horay u degi jirin. Ambouli waxay ahayd tuulo yar kahor intaysan Faransiisku imaanin waxay qiyaastii 3 Km koonfur kaga beegan tahay magaalada Ras Jabuutiil, Ambouli waxaa loo aqoonsan yahay magaalada 'Canbala' ah O.G.S. Crawford. Canbala wuxuu ka muuqdaa khariidadda Muhammad al-Idrisi ee 1192 xeebta Geeska Afrika, koonfur-bari ee dariiqyada Bab-el-Mandeb, iyo Cambaleh, oo ah magaalo ay ku safrayaan socdaalka Venetian Bragadino, oo ah qarnigii 13-aad ee Yurub u soo booqda Itoobiya, deggenaa siddeed sano.
Waddanmaha Degaaan Djibouti Mallgoka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Arab League 3000+
Sanadkii 1896, dejinta waxaa laga dhigay caasimada Faransiiska Somaliland Ujeedada ugu weyn ee danta Faransiiska waxay ahayd gudaha laga ilaaliyo wadada ganacsiga Madagascar iyo Indochina ee Ingiriiska iyo Talyaaniga. Magaalada ayaa markii dambe si weyn u kordhay kadib markii la dhisay Dhismaha Wadada Tareenka ee Imaaraatka. Si dhakhso ah ayey u kortay, iyada oo ka soo bilaabmaysa 1,200 oo qof oo deggan 1893 ilaa 5,561 sanadkii 1906. Intaa waxaa sii dheer, aagga hodanka ah ee koonfurta ee Ambouli wuu sii kordhayay sababtuna tahay dhul beereedyo fara badan oo timir iyo geedo leh. Dekadda Jabuuti waxay noqotay meel kaydka u ah Maraakiibta Badda ee marinnada u dhaxaysa Faransiiska, Madagascar iyo Indochina bishii Nofeembar 1895.
Waqtigaas waxaa lahaa dad deggan 15,000 oo qof, oo aad uga badan tirada dadka ku nool dhammaan magaalooyinka deriska la ah Itoobiya marka laga reebo Harar. In kasta oo shirkaddii ugu horreysay ay ku guul darreysatay oo u baahatay siidayn dowladda si looga fogaado inay ku hoos dhacdo maamulkii Ingiriiska, Waddada Tareenka ee Faransiis-Itoobiyaan lafteeda waxay ahayd guul waxayna u oggolaatay ganacsiga magaalada Jabuuti inuu si dhakhso ah u baabi'iyo ganacsigii hore ee salka kulahaa ee laga sii watay agagaarka Zeila ee ku dhow Dhulka Soomaalida ee Biritishka. Jabuuti waxay noqotay xarunta laga dhoofiyo koonfurta Itoobiya iyo Ogaadeenya, oo ay kujirto ganacsiga kafeeka Harari iyo qaadka. Magaalada Jabuuti waxay bilaabatay inay horumariso sidii xarun ganacsi. Sanadkii 1932, Magaalada Jabuuti waxay ahayd magaaladii ugu horreeysay ee korantada ka baxda Faransiiska Somaliland.
Plaza 27 Juun 1970-kii.
Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Magaalada Jabuuti waxaa ku dhuftay duqeymo xagga cirka ah oo Talyaaniga ka dhacay Juun 21, 1940, kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo magaalada ku sugnaa. Dabka ka hortagga diyaaraduhu wuxuu ahaa mid daran oo laba diyaaradood oo Talyaani ah ay ku guuldareysteen inay soo noqdaan, laakiin dab iyo qaraxyo ayaa lagu arkay Jabuuti. Habeenkii, dhowr mawjadood oo ka mid ah kuwa wax duqeeya ee Savoia-Marchetti SM.81 ayaa weerartay xarumaha dekedda. Kadib faransiisku wuu dhacay oo gumeystahaasna waxaa xukumayey dowladda taabacsan Axis Vichy (Faransiiska). Waqtigaas, weerarkii Ingiriiska ee ka dhanka ah dadka reer Talyaani wuxuu adkeeyay xannibaadda Faransiiska Somaliland, abaarna waxay ku jirtay. Dadka deegaanka ayaa ku magac-daray xannibaadda carmii, oo ah eray loogu talagalay nooc hadhuudhka had iyo goor loo habeeyo lo'da, laakiin waxaa loo adeegsan jiray cuntada bini-aadamka marka la eego dhererka abaarta. Bishii Disember 1942, qiyaastii 4,000 oo ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Faransiiska ee Xorta ah ayaa qabsaday magaalada.
Tirada dadka Magaalada Magaalada Jabuuti ayaa si xawli ah u koraysay, iyadoo si rasmi ah u dhawaad 17,000 degganeyd sanadkii 1947. degsiimooyinka, abaabulidda dhismayaashaas ee ku teedsan barxadaha u furan bartamaha, iyo isu-imaatinka xarumaha dhaqameed si loo sameeyo xarun rayid. Waxay markaa noqotay xaruntii ku guuleysatey Dadka Faransiiska ee Afars iyo Issas.
Markii ay Jabuuti ku dhawaaqday xornimada 27 Juun 1977, tirada dadka Magaalada Jabuuti waxay kor u dhaaftay 110,000, magaaladu waxay u shaqeysay inay tahay caasimada maamulka iyo ganacsiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti.
Gobolka Jabuuti[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Gobolka Jabuuti waa mid ka mid ah lixda gobol ee Jabuuti. Waxaa xudduud la leeyahay Gacanka Tajuura u waqooyiga iyo waqooyi bari, iyo gobolka Carta si Koonfureed iyo dhinaca Galbeed. gobolka Jabuuti waa gobolka ugu yar dalka, laakiin sidoo kale gobolka leh dadweynaha ugu sareeya.
Saoudi Mosque .
Café de la Gare,.
A Saba Islamic Bank
Dileita Mohamed Dileita,
Magaalada Jabuuti ayaa caasimada ee Jabuuti tan iyo madax 1977. Waxay ahayd doorasho suuro galka ah sida Jamhuuriyadda xarunta dhalinyarada maamulka. Madax 1977 Ka dib, magaalada Jabuuti sii sharci darro xarun siyaasadeed iyo dhaqameed ee dalka. Jabuuti waxay leedahay hudheelo badan oo ku yaal dhammaan qaybaha, laga bilaabo raaxo ilaa aasaasiga, iyo sidoo kale makhaayado badan oo bixiya takhasusyo Jabuutiyaan ah iyo cuntooyin kale. Jabuuti waa degitaanka ugu badan ee Jabuuti, oo leh nolol dhaqameed oo firfircoon. Qaar badan oo ka mid ah taariikhdeeda dhowaan, magaalada waxaa lagu gartaa suuqyada waddooyinka iyo dukaamo yaryar oo iibiya alaabo kala duwan. Dhaqanka Jibriilku wuxuu kobciyay saameyn dad badan oo kala duwan iyo dhaqanno kala duwan, oo ay ku jiraan caadooyinka Soomaalida, Afar, Yaman iyo Faransiis. Caasimaddu waxay ku taallaa masaajid tiro badan oo qaabab kala duwan ah, kuwaas oo taariikhda kala duwen taariikhda kala duwan. Shan jeer maalintii, Muslimiinta waxaa loogu yeeraa salaadda minarets ee masjidka badan ee magaalada. Intaa waxaa dheer, hawlgalada maxalliga ah waa nooc dhaqameed oo ah masrax muusig oo si fiican looga yaqaan guud ahaan dalka. Dharka Jabuuti waa mid ka mid ah dalal badan oo Geeska Afrika ah. Warbaahinta Jabuuti waxay muddo dheer ahayd xarunta warbaahinta ee dalka. Noocyada ugu horreeya ee filimka dadweynaha ee magaalada iyo magaalada Jabuuti oo aad u weyni waxay ahaayeen wargeysyo dhacdooyin muhiim ah intii lagu jiray xilligii gumeysiga hore. Telefishinka Jabuuti ee fadhigeedu yahay magaalada Jabuuti waa kan ugu weyn ee adeegga dadweynaha ee qaranka. Diyaaradaha RTD 24 saacadood maalintii, waxaana laga arki karaa gudaha Jabuuti iyo dibeddaba iyadoo loo marayo mashiinnada dhulalka iyo satellite-ka. Dhowr wargeys, majalado iyo xarumo daabacan ayaa xafiisyadooda ku yaala caasimadda. Intaa waxaa dheer, Jabuuti waa xarun warbaahineed, iyada oo dhowr xarumo raadiye iyo telefishin oo ka socda halkaas. Filimada iyo muusikada kala duwan ayaa sidoo kale lagu duubay magaalada. Cuntada Café de la Gare, mid ka mid ah makhaayado caan ah oo magaalada ku yaal. Jabuuti waxay muddo dheer caan ku ahayd cuntooyinkeeda kala duwan. Cuntada Soomaaliya, Afar iyo Yamaanida ah ayaa la shaqeeya cuntooyinka caalamiga ah; gaar ahaan farshaxan-gacmeedyada Faransiiska. Cuntada Yemeni mandi ayaa sidoo kale ah cunto caan ah, gaar ahaan waqtiga qadada. Dhawr noocyo kale oo caan ah ayaa ka muuqda cuntooyinka badda iyo hilibka, oo ay ku jiraan Fah-fah (maraq hilibka lo'da la kariyey). Intaa waxaa dheer, waxaa jira dhowr makhaayado oo ku yaal magaalada oo dhan. Xarumahaas waxay ka shaqeeyaan wax walba oo ka yimaadda suxuunta dhaqanka, si ay ugu diyaargaroobaan dukaamada, si ay u cunaan cunto iyo cunto fudud. Café de la Gare iyo Zip Zap Restaurant iyo Shisha Lounge ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan ee caanka ah. Waxaa jira makhaayado cunto oo degdeg ah, sida Bartamaha iyo Burger City. Damaashaadka Dhacdooyinka iyo dabaaldegyada sanadlaha ah ee Magaalada Jabuuti waxaa ka mid ah Maalinta Xornimada, oo loo dabaaldegayo 27-ka Juun. Damaashaadka muslimiinta ee Eid al-Fitr iyo Eid al-Adha ayaa sidoo kale u muuqda mid si muuqata uga dhex muuqda dhaqamada magaalada, dhacdooyinka iyo dabaaldegyada. Dhacdooyin kale oo maxalli ah, qaran iyo caalami ah ayaa lagu qabtaa halkan sanadka oo dhan. Cayaaraha Sida ka jirta Jabuuti inteeda kale, kubadda cagtu waa ta ugu caansan kubada cagta, kubbadda kolayga ayaa sidoo kale ah cayaar labaad oo caan ah magaalada.
Jabuuti waa dejinta ugu daawashada ee Jabuuti, iyo wuxuu leeyahay nolosha dhaqanka firfircoon. Dhaqanka ee Magaalada Jabuuti ayaa u qoondeeyey oo sarkhaansan yihiin dad faro badan oo kala duwan iyo ilbaxnimo, oo ay ku jiraan Soomaali, Canfarta, Yemeni iyo dhaqanka Faransiis. Caasimadda waxay hoy u tahay tiro badan oo ah masaajidada ee Hababka naqshadda kala duwan, kuwaas oo taariikhdoodu muddadii kala duwan.
Cimilada Jabuuti (Magaalo)[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Jabuuti guud ahaan waa mid aad u kulul oo qalalan koorsada ee sanadka oo dhan. Oo kali ah jira maalmood oo kasta ee sanadka iyadoo aan qorax, iyo xitaa xilliga jiilaalka waxaa jira maalmo badan cad. Jabuuti (magaalo) waa la yaala bariga Jabuuti, qiyaastii 21 km (13 mi) koonfur bari ee xadka Soomaaliya.
Faahfaahin Cimilada Jabuuti (magaalo)
Source: National Meteorological Agency
Magaalooyinka La mataanoobay[wax ka badal | wax ka badal xogta]
United Arab Emirates Al-fujayra
Template:Country data Malta Victoria
United States Kailua
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jabuuti_(magaalo)&oldid=224826"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Nofeembar 2021, marka ee eheed 13:50.